हाम्रा पुर्खाले पटुकीमै बिरुवासमेत बर्मा पुर्‍याए
ज्ञानबहादुर थापा बगाले, बर्मेली साहित्यकार
२०७५ फागुन ७ मंगलबार ०६:४०:००
(बर्मामा नेपालीहरुको ठूलो बस्ती छ । सन् १८८५मा अंगे्रज र बर्माकाबीचमा युद्ध भएपछि ब्रिटेनले गोर्खा सैनिक परिचालन गरेको भेटिन्छ । यसरी नेपालीहरु बर्मा पुगेको इतिहासमा अंकित छ । यहीँबाट नेपालीहरुको बसोबास बर्मामा हुँदै गयो । त्यसपछि ब्रिटेनले विकासका काम गर्दै जाँदा थप नेपाली कामदारहरु त्यहाँ पुगे । यसरी बर्मामा नेपालीहरुको ठूलो बस्ती भयो । अहिले करिब दुई लाखका हाराहारीमा बर्मामा नेपालीहरु रहेको अनुमान गर्छन् बर्माबाट प्रकाशित हुने ऐरावती पत्रिकाका सम्पादक ज्ञानबहादुर थापा बगाले । हालै नेपाल आएका ज्ञानबहादुरसँग आइतबार नेपाली भाषा र साहित्यको बर्मामा जगेर्नाका विषयलाई लिएर कुराकानी भएको थियो । उनी ‘अखिल म्यान्मा देशीय गोर्खा हिन्दु धार्मिक संघ’को केन्द्रिय शिक्षा विभागका प्रमुख पनि हुन् । प्रस्तुत छ, ज्ञानबहादुर थापा बगालेसँग बाह्रखरीका राजेश खनालले गरेको कुराकानीको अंश ।
नेपालभन्दा हजारौं किलोमिटर टाढा, बर्मामा रहेर नेपाली कला साहित्यको जगेर्ना गर्न लागिपर्नु भएको छ । कसरी गरिरहनु भएका छ ?
जब हाम्रा पुर्खाहरु प्रवासिएर बर्मा पुग्नु भयो त्यसबेला उहाँहरुले यहाँको बिरुवासमेत पटुकीमा बोकेर लानु भयो । सँगै रामायण, महाभारत, अन्य धार्मिक ग्रन्थहरु पनि लिएर जानु भएको थियो । जब उहाँहरु त्यहाँ बस्न थाल्नुभयो, सबै नेपालीहरु एउटै टोल बनाएर बस्नु भयो । एउटै समाज तयार गर्नुभयो । अनि उहाँहरुले आफ्ना बच्चाहरुलाई घरैमा रुद्री, चण्डी पढाउने काम गर्नुभयो । यसरी नै पछिपछि पाठशालाहरुको व्यवस्था पनि गर्दै जानु भयो । विशेषगरि मन्दिर स्थापना गर्दै त्यसलाई संस्कृत र नेपाली पाठशालाका रुपमा विस्तार गर्दै जानु भयो । यसरी नेपाली पठाउने काम गर्नु नै नेपाली कला संस्कृतिको जगेर्नामा उहाँहरुले दरिलो पाइला चाल्नु भएको हो ।
बर्मामा सरकारी तवरमै नेपाली पढाइन्छ ?
होइन् । सरकारी स्कूलमा म्यान्मा भाषा र अंग्रेजी भाषामा मात्रै पढाई हुन्छ । नेपाली भाषामा हुँदैन । तर बर्मामा सरकारी स्कूल तीन महिना बिदा हुन्छ । त्यो बिदाको अवधिमा हामी सबै केटाकेटी र किशोर अनि युवाहरुलाई समेटेर नेपाली भाषाको कक्षा लिन्छौँ । त्यहाँ २२७ वटा नेपाली पाठशाला छन् । त्यसैमा हामीले नेपाली भाषा, साहित्य र संस्कृति पढाउँछौ । ती नेपाली स्कूलहरुमा बिदाको समयमा नेपाली पढाईन्छ । त्यसका लागि स्कूल बनाउने, शिक्षक राख्ने सबै हामी नेपालीहरुले आफ्नै लगानीमा गर्दै आएका छौँ । म्यान्मारमा तीन सय वटा मन्दिरहरु छन् । हामीले पाठशाला त्यही मन्दिरमा राख्दै आएका छौं । हामी मन्दिरको छत्रछायाँमा रहेर नेपाली भाषा साहित्य संस्कृति पढ्छौंभन्दा हुन्छ । त्यसै क्रममा विभिन्न चाड पर्वमा हामी मन्दिरमा जान्छौं र सांस्कृतिक क्रियाकलापमा सहभागी हुन्छौ । यसरी हामीले नेपाली कला र संस्कृतिको जगेर्ना गर्दै आएका छौं ।
साहित्यमा सक्रिय को–को हुनुहुन्छ ?
हामीसंग नेपाली साहित्यमा लाग्नुहुने व्यक्तिहरु कम हुनुहुन्छ । विशेष गरी जगदम्बाश्री पाउनु हुने ठाकुरप्रसाद गुरागाई, अर्का साहित्यकार लक्ष्मण न्यौपाने हुनुहुन्छ । अरु पनि केही हुनुहुन्छ । कोही भरखरै सिक्दै हुनुहुन्छ । त्यस्तै पत्रपत्रिकाहरुको प्रकाशन हामीले गर्न सकेका छैनौं । पत्रपत्रिका व्यापकरुपमा फस्टाउन सकेको छैन । अहिले मेरो सम्पादनमा ‘ऐरावती’ साहित्यिक पत्रिका प्रकाशन हुँदै आएको छ । यो पत्रिका हामीले हरेक नेपालीको घरघरमा पुर्‍याएका छौ । यसरी हामी भरखरै बामे सर्दैछौ भन्ने मलाई लाग्छ । वास्तवमा विगतमा बर्मामा आर्मी शासन थियो । त्यसबेला नेपाली मात्रै होइन म्यान्मा भाषामा पनि लेख्न गाह्रो थियो । अहिले म म्यान्मा भाषामा पनि पत्रपत्रिकाका लागि लेख्छु । पहिले जोगिएर लेख्नु पर्दथ्यो । अहिले त्यति कडा अवस्था छैन ।
पहिलेको कठिन अवस्थामा पनि तपाईहरुले नेपाली भाषाको जगेर्ना गर्दै जानु भयो ? कसरी ?
हामीले अगाडि मन्दिर देखाएर रामायण/महाभारत पढाउँदैछौ भनेर नेपाली भाषा पढाउँथ्यौं । उनीहरुलाई पनि के थियो भने गोर्खाहरुले गलत गर्दैनन् । त्यसैले हाम्रो धार्मिक क्षेत्रमा र भाषा पठनपाठनमा उनीहरुले कहिले पनि हस्तक्षेप गरेनन् ।
तीन महिनाको कक्षागत पढाई कसरी अगाडि बढाउनु हुन्छ ?
हामी कक्षा १ देखि १० सम्म नेपाली पढाउँदै आएका छौ । त्यस पछि दुई वर्ष हामीले नेपाली भाषाको डिप्लोमा कोर्सका रुपमा विकसित गरेका छौ । जहाँ नेपाली साहित्यको पढाई हुन्छ ।
त्यो तीन महिनाको छुट्टीमा नै यी यावत कुरा गरिन्छन् ?
हो । यो तीन महिना हामीले पुरा पढाउँछौ । नेपाली विषयको सैद्धान्तिक ज्ञान दिन्छौ विद्यार्थीहरुलाई । त्यो समय पछि विभिन्न पर्व अर्थात भानु जयन्ती, देवकोटा जयन्तीलगायतका कार्यक्रमहरुमा साहित्यिक गतिविधि गर्दछौ । त्यस्तै अन्य सांस्कृतिक पर्वका बेला पनि विभिन्न कार्यक्रमहरु गरेर नेपाली साहित्य र संस्कृतिलाई लिएर विचार विमर्श गर्छाै । कवि गोष्ठीलगायत अन्य साहित्यक कार्यक्रम पनि समयसमयमा हुँदै आएका छन् । पढाउँदा शिशु कक्षादेखि दश कक्षासम्म तीन महिना नेपाली पढाउँछौ । घरमा फूर्सदमा घरमा बसेर नेपाली पढने क्रम त छँदैछ ।
नेपाली पत्रपत्रिकाहरु पुग्छ कि पुग्दैन ?
नेपाली पत्रपत्रिकाहरु खासै पुग्दैनन् । अहिले नेपाली अनलाईन पत्रिकाबाट कतिपय जानकारी लिँदै आएका छन् । युट्युबहरुबाट भने नेपाली गीत सिक्दै आएका छन् केटाकेटीहरुले । र डिप्लोमा कोर्सकालागि थेसीस लेख्ने क्रममा पनि विद्यार्थीहरुले नेपाली अनलाईनहरुबाट धेरै कुरा पढ्दै आएका छन् । वास्तवमा विद्यार्थीहरु नेपाली भाषाका लागि मेहनत गरिरहेका छन् । यो नै हाम्रो लागि खुशीको कुरा हो ।
नेपाल सरकारले तपाईँहरुको यो काममा सहयोग गर्छ कि गर्दैन ?
हामीले बेलाबेलामा नेपाल सरकार र तिनका निकायहरुमा हामीलाई सहयोग गर्नुस् भनेर कुरा उठाएका हौं । तर आजसम्म पनि कुनै सहयोग हामीले पाएका छैनौं । यहाँका साहित्यकारहरु पनि खासै म्यान्मा पुग्नु हुन्न । यदाकदा कोही कोही पुगिहाल्नु भए पनि खासै केही उपलब्धी हुँदैन । हो पहिले बर्मास्थित नेपाली एम्बेसीमा कार्यरत कर्मचारी साहित्यकार दुबसु क्षेत्री/कृसु क्षेत्रीहरु हुँदा उहाँहरुले विभिन्न साहित्यिक कार्यक्रमहरुमा हामीलाई सहयोग र साथ दिनुभएको थियो । तर साहित्यमा रुची नभएका कर्मचारी हुँदा कुनै सहयोग मिल्दैन । अहिले भीम उदास हुनुहुन्छ । उहाँले पनि हामीलाई सहयोग गरिरहनु भएको छ ।
बर्मामा भारतीयहरु पनि हुनुहुन्छ । भारतले कल्चरल एम्बेसेडर नै राखिदिएका छन् त्यहाँ । कैयन पुस्तकालयहरु स्थापना गरिदिएका छन् । तपाईलाई भनुँ, मलाई भारतीय काउन्सिलरले दुईचार पटक नै भनिसक्नु भयो तपाईका २२७ वटा स्कूलमै हिन्दी भाषा पढाउनुस् । तपाईहरुका लागि हामीले स्कूलमा सहयोग गर्छौ, टिचरको व्यवस्था गरिदिन्छौं, पास भएका विद्यार्थीहरुलाई भारतमा स्कलरसिपमा पढ्ने व्यवस्था मिलाईदिन्छौ । तर हामीले नाई भनिदियौं । हामीलाई हाम्रो भाषा नै प्यारो छ । हामी त्यता लागे त नेपाली भाषा हराउँछ । तर यता नेपाल सरकारले भने अलिकति पनि हेरेको छैन । वास्तवमा नेपालको कल्चरल एम्बेसडर नै राखिनु पर्ने हो म्यान्मामा ।
यतिबेला नेपाल आउँनु भएको छ । नेपाल सरकारलाई केही भन्नु भएन् ?
खासमा, यस पटक म म्यान्माका नेपाली विद्यार्थीहरुका लागि मिल्दो पाठ्यक्रमको व्यवस्थापन गर्न आएको हुँ । र मैले केही काम सक्याएँ पनि । जबकी यस विषयमा सहयोग गर्न हामीले बर्मामा रहेको नेपाली राजदूतावास मार्फत नेपाल सरकारलाई अनुरोध पनि गरेका थियौं । तर नेपाल सरकारले कुनै ‘रेस्पोन्स’नै गरेन । हामीले छ सात महिना कुर्‍यौं, तर कुनै जवाफ आएन् । त्यस पछि यसरी भएन भनेरै हामीले व्यक्तिगतरुपमा आफै यहाँका केही विज्ञ र विद्वान व्यक्तिहरुको सहयोग लिएर काम गर्‍यौं । हामीले थालेको आधा काम सकिएको छ ।
हामीले हाम्रो कुरा राष्ट्रपति कहाँ पनि पुर्‍याएका छौ । परराष्ट्र मन्त्री कहाँ पनि पुर्‍याएका छौ । तर केही पनि भएको छैन !
तपाईँहरुले लेखेका नेपाली भाषाका रचना कहाँबाट बढी छापिन्छन् ?
नेपाली पत्रपत्रिकाहरुमा हामी आफ्ना रचना पठाई रहेका हुन्छौ । त्यस बाहेक सिक्किम, दार्जिलिङ, असमबाट प्रकाशित हुने नेपाली पत्रिकामा पनि पठाउँछौ । असम नजिक भएकोले पनि हामी निकट छौ त्यहाँ । हामीले प्रकाशित गर्दैआएको ऐरावती पत्रिकामा लेख रचना छापिनु त स्वाभाविक नै भयो ।
बर्मामा नेपाली बालबालिकामा लेख्ने क्रम कस्तो छ ?
बालबालिकाहरुमा लेखनपठ्न प्रवृत्ति बढ्दो छ । तर उनीहरुले आफूमा गुणात्मक सुधार ल्याउनु जरुरी छ । उनीहरु पनि गीत, मुक्तक र गजल लेख्न थालेका छन् । यसले पनि उनीहरुको साहित्यप्रतिको उत्साह बढ्दै गएको देख्न सकिन्छ । अहिले फेसबूकमा पनि साहित्यमा लाग्ने केटाकेटीहरुले आफ्ना रचना पोस्ट गर्दै आएका छन् । नेपाली साहित्यको उत्थानमा यो पनि एउटा योगदान हो भन्ने लाग्छ ।